မီတာခ ပေးစရာမလို အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်တဲ ပလက်စတစ်ဘူးတွေနဲ့ အဲကွန်းကို တီထွင်လိုက်တဲ့ ‘ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား’ – Shwe Naung
N N | January 1, 2021 | Knowledge | No Comments
မီတာခ ပေးစရာမလို အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်တဲ ပလက်စတစ်ဘူး တွေနဲ့ အဲကွန်းကို တီထွင်လိုက်တဲ့ ‘ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား’…
သုံးစွဲထား ပြီးသား ပလပ်စတစ် ဘူးခွံ တွေကို ဘာတွေ လုပ်လို့ရလဲ.. ပန်းအိုး…ရေသန့်ဘူး….လေအေးပေးစက်….
ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ကလည်း ပိုမို ပူနွေး လာတာနဲ့အမျှ လူသားတွေက လျှပ်စစ် စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုပြီး ပန်ကာတွေ၊ လေအေးပေးစက်တွေကို သုံးစွဲလာ ကြတာဖြစ် ပါတယ်။ ဓာတ်အားမလိုပဲ အဲကွန်းဖွင့်နိုင် မယ်ဆိုရင်ရော..
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား ‘Ashis Paul က Eco-Cooler’ လို့ခေါ်တဲ့ ပလက်စတစ် ဘူးခွံ တွေနဲ့ လေအေး ပေးစက်ကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဒီအကြံကို ‘Physics’ ဆရာက သူ့သမီးကို ဓာတ်ငွေ့များ လာတာနဲ့ အေးတဲ့အကြောင်းကို ရှင်းပြနေတဲ့ အချိန်မှာ ကြားပြီး ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပလက်စတစ်ဘူးခွံ တစ်ဝက်ကိုဖြတ်ပြီး အပေါက် ဖောက် ထားတဲ့ ဘုတ်ပြားပေါ်မှာ စွပ်ပြီးကပ် ထားရပါမယ်။ ပြီးတော့ ဘုတ်ပြားကို ပြတင်းပေါက်မှာ တပ် ထားရပါမယ်။ အပေါက်သေးတဲ့ ဘူးအဖုံး ဘက်ခြမ်းကိုတော့ အိမ်ထဲမှာ ထားရပါမယ်။ ကျယ်တဲ့ဘက်ခြမ်းကို အပြင်မှာ ထားရပါမယ်။
တကယ်ရော အေးရဲ့လား.. ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တာလဲ..
ကျယ်တဲ့ ဘက်က လေဝင်ပြီး အပေါက် သေးတဲ့ ဘက်က လေထွက် လာတဲ့အခါ လေဖိအား ပြောင်းလဲ ခြင်းကြောင့် အေးတဲ့လေကို ပြန်ထွက်ပါတယ်။
(ဥပမာ ) လက်ကို ပါးစပ်ဟပြီး လေမှုတ် ထုတ် လိုက်ရင် လေက နွေးနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှုတ်ခမ်းကို အပေါက် သေးသေးလေးလုပ်ပြီး လေမှုတ် ထုတ်လိုက် တဲ့အခါမှာတော့ အေးတဲ့လေ ကိုရပါတယ်။ အဲ့ဒီ သဘော မျိုးပါပဲ….
‘Eco-Cooler’ က အပူချိန်(5)ဒီဂရီ ‘Celsius’ လောက်ကို လျော့ချ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး မီတာခလည်း ပေးစရာမလို၊ အလွယ်တကူလည်း ရနိုင်တဲ့ သုံးပြီးသား ပလက်စတစ် ဘူးခွံတွေကို ‘DIY Eco-Cooler’ လေးပြု လုပ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ် နိုင်ကြောင်း အကြံပေးလိုက် ပါတယ်။ (Ecoromance Team)